Landa iilwandle ecaleni kwam kunye neelwandle ezingama-25 eziLungileyo eLos Angeles
By UChrisking Septemba 23, 2021 yokuPhila, hamba 0 Comments
- Amanxweme kufuphi nam -
Indawo elunxwemeni (ngakumbi xa ubunokwanela kwezithuthi) yenye yezona zinto zinomtsalane kwindawo yaseLos Angeles.
Sibeka uluhlu lwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zokuphumla yiPacific kwingingqi yaseLos Angeles, nokuba unenja, ufuna ukuxhoma i-glide, ufuna ukwenza i-snorkel okanye i-kayak, awunakufumana ngokwaneleyo amaza okubamba kwi-surfboard yakho , njenge-birding okanye ufuna nje ukudada kunye nokulala.
Ngaphandle kweHollywood kunye nokugcwala kwabantu, iLos Angeles mhlawumbi yaziwa kakhulu kwintelekelelo eyaziwayo yeelwandle zayo.
Ummandla waseLos Angeles unamacandelo amahle kakhulu kunye nolunxwemeni, ukusuka kumachibi amanzi ePalos Verdes Peninsula ukuya kwiintlabathi zeMalibu.
Ukujonga kunye nezandi zeVenice Ocean Front Walk kunye neSanta Monica Pier kusenokwenzeka ukuba ziqhelekile kubahlali nakwiindwendwe. Kodwa ayizizo zodwa iilwandle eLos Angeles; zezona zixakekileyo.
Unoko engqondweni, nazi iilwandle ezili-13 kwindawo efanelekileyo yokubhukuda, ukuhlamba ilanga, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba intaba, ukuhlola, nayo yonke into ofuna ukuyenza elunxwemeni.
Apha ngezantsi kukho ezinye iilwandle ezikufuphi nam kunye neelwandle ezingama-25 eziLungileyo zokuLandelela eLos Angeles:
1. Khomba ulwandle iMugu
Kukude ukuqhuba ukuya elunxwemeni, elingaphandle nje komda weVentura County, kodwa umvuzo uyilitye elingummangaliso, elinamatye kunye nolunye usuku oluhle kakhulu kwelanga laseMazantsi eCarlifonia.
Emva kokuhambahamba kwipaki yaseburhulumenteni ekufuphi, unokuphola kwi-surf.
2. URobert H. Meyer Memorial State uLwandle
Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
I-El Pescador, iLa Piedra, kunye ne-El Matador amalwandle aphakathi kwamacandelo amancinci kunxweme lolwandle olukhulu.
Le yokugqibela inikezela ngokwakhiwa kwamatye anomdla kunye nemiqolomba yokuphonononga, kwaye zontathu ezi ndawo zintle zokuntywila kwamaza kunye nolwandle.
3. IParadesi Cove Beach
IParadise Cove Beach lulwandle oluncinci lwabucala-loluntu oluhleli ngasemva kweentaba zaseMalibu. IParadesi Cove Beach Cafe, ebonelela ngayo yonke into eluncedo exhaswa ikakhulu lulwandle, kodwa ukuba ufuna ukudada okanye ukusefa, ungandwendwela ulwandle simahla.
Abantu abaninzi beza kuqesha amathala abucala, oomatrasi baselwandle, kunye neelounger kwaye yenye yezona ndawo zinoxolo eMalibu ukuba ungabeka imali kubo (iipatios zabucala zinokuqhuba ngaphezulu kweedola ezingama-800 ngeyona veki ibiza kakhulu).
Ukuba ufuna ulwandle olumnandi ukuchitha iholide yakho, yiya eParadise Bay usuka e-Escondido, kwaye ukutshona kwelanga, uyakuba uyifumene iglasi ye-rosé.
4. Unxweme lwaseVenice
Yiza ku Venice Beach kwimayile enesiqingatha seesanti zesilika apho ungasasaza khona ingubo kwaye ujonge kwiPacific.
Kananjalo unokuhlala kwindawo ethandwayo yaseVenice Beach Boardwalk, apho abadlali bezitrato kunye nabathengisi beebusk kwaye bathengise izinto zabo, amadoda emisipha aphakamisa ubunzima obukhulu, kunye neenkcubeko.
Yindawo ephithizelayo yabantu abafuna isenzo esincinci elwandle.
5. ICarbon Beach (iBillionaire Beach)
ICarbon Beach ayilolwandle lwabucala, kodwa inoluvo lwenye. Uza kubona abanye abantu abambalwa xa usiya ngasemva kwezindlu ezi-ultra, ezityebileyo kodwa kungenjalo, le ndawo inde yolwandle imalunga nokuba yodwa njengoko uMalibu efumana.
Amanzi alungele ukudada kuba azolile kwaye akanamatye, kwaye isanti igudile kwaye iyafudumeza — ilungele ukulala yonke imva kwemini. ICarbon Beach ikulungele ukuhamba ngoxolo okanye ukubaleka.
Kukho iindawo ezimbalwa kwi Malibu ezingafakwanga ngabakhenkethi, kwaye yenye yazo, ke zisebenzise.
6. I-Escondido Beach - iMalibu
Ngaba kukhona elunxwemeni oluzimeleyo ngakumbi kuneEscondido"? Olu, njengeCarbon Beach, lulwandle lwabucala lwaseMalibu olufihlwe ngasemva kwezindlu ezintle apho abakhenkethi baqhuba khona bedlula bengazi nokuba kulapho.
Unxweme apha lincinci kancinci kunaseCarbon, ke licebo elihle ukujonga amaza ngaphambi kwexesha kuba umsinga wamanzi omkhulu ushiya indawo encinci eyolula ingubo.
Ukuhamba kwelinye icala kuyinto entle, kwaye ukuhambahamba ukusuka e-Escondido Beach ukuya ngasentshona kuyabiza kulwandle lweParadise Cove kuyathandwa ngabantu balapha. Akukho ndawo yokupaka; endaweni yoko, indawo yokupaka yoluntu iyafumaneka ecaleni kwe-PCH.
I-Escondido Beach ineendawo ezimbini zokufikelela kuluntu: enye kwibhulorho ngaphaya kwe-Escondido Creek kunye nenye kufutshane ne-27148 Pacific Coast Highway.
Ngaphandle kokuhlala iyure nje, uninzi lwe-Angelenos aluyazi le ndawo yokuhlala izolileyo eRancho Palos Verdes. Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
Iindlela ezininzi zokunyuka intaba kunye nendawo yogcino lwendawo ekhuselekileyo enamawa akhuselweyo anika umbono omangalisayo wePasifiki, Abalone Cove kuyonwabisa ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukeneyo okanye ukhululeke esantini.
Inezinye zamaza amakhulu amaza omoya aseCalifornia kunye neephaneli ezinkulu zokuhlola. Ngenxa yamatye awayo kunye namawa angazinzanga ngasentla, ezinye zolwandle kunye neendawo ezinamanzi amdaka zivaliwe, ke jonga imephu ukuqinisekisa ukuba ukwindawo ekhuselekileyo.
Ukubhaka kunye namalangatye, kunye nezilwanyana zasekhaya, akuvumelekanga.
Izinto zokwenza eNashville
Izinto zokwenza eCarlifonia
Iikati zaseBengal ziyathengiswa
8. El Pascador Ulwandle - Malibu
I-El Pescador yenye yezinto ezintathu zaseMalibu zobuncwane ezibandakanya uRobert Meyer Memorial State Beach (ezinye ezimbini ziyi-El Matador neLa Piedra).
Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam. Inayo yonke: isanti, amaza omoya, izindlu zangasese, kunye nokufihlwa okongeziweyo okutyeleleyo ngamanye amaxesha.
Ngalunye lweelwandle ezintathu kwiqela linophawu lwalo, kunye nendawo yokupaka (ehlawulelweyo) yokupaka emazantsi eLeo Carillo awaziwayo. Intshona yesithathu kwezi Elwandle lasePescador.
Uhambo olufutshane lokuhamba kwindlela ethe tyaba ukusuka kwindawo yokupaka kwi-32900 Pacific Coast Highway iyimfuneko ukufikelela elunxwemeni, okuyindawo enesanti eneeringi zamanzi.
9. Ulwandle lwaseLaguna
Yehlisa iifestile kwaye usike i-Natasha Bedingfield xa ushiya iiNduli kwaye uyehla unxweme usiya ngakuye Ulwandle lwaseLaguna.
Idolophu encinci kunye nenhle yedolophu yaseOrange uqhosha ngaselunxwemeni lweekhilomitha ezisixhenxe, kunye nemiqolomba yolwandle, amachibi olwandle, iimpawu zaselwandle, kunye namachibi ohlobo oluqhelekileyo lwamanzi, ngaphandle konxweme oluninzi olunamathuba amaninzi okuba ufuna ukuntywila isambrela sakho kwaye uphumle emva kwemini.
Njengomsuka we-skimboarding, isenzo esifana nokukhwela esiquka ukugudla umphezulu wamanzi ukuhlangabezana namaza aqhekezayo njengoko engenayo, akubangakho ndawo inkulu yokuhlaba lo mdlalo ugwenxa-okanye ujonge njengombukeli nje xa abantu bendawo baqhayise ngobuchule babo.
Qiniseka ukuba iphindwe kabini jonga imigaqo, njengoko unxweme ngalunye lunelungiselelo lalo kwimithambo evunyelweyo. Le yenye yeeNdawo zoLwandle eziLandelayo kufutshane nam.
I-Bow Narrows yindawo eselunxwemeni edumileyo apho uza kubona ukutywina okuphumlileyo kwiiyadi ezili-100 zolwandle kwi-Seal Rock, kunye ne-skimboarding, ukutsiba nge-scuba, ukusefa ngomzimba, ukudibanisa amaza, kunye nokuzilolonga ngeendlela ezahlukeneyo kuvunyelwe.
I-Thalia Road lukhetho oluphezulu phakathi kwabahambi ngenyawo, ngelixa iWood's Bay kunye neDarling's Inlet zinamanzi anzulu afanelekileyo okutsiba kunye nokuphanda amachibi amaza.
Uninzi lwazi uLwandle oluMnyama eLa Jolla, eSan Diego, njengenye yeelwandle zaseCalifornia ezingenanto EMantla eRincon (ekubhekiswa kuyo ngabantu basekuhlaleni njengeeBates Seashore) yenye yeendawo ezikhululekileyo apho unokulahla khona imigca yeetan, okanye usebenzise amaza esandla sasekunene esenza olu lwandle lolwandle lube yeyona ndawo ikhweleyo kwiFocal Coast.
Unxweme lolwandle lweemayile ezintathu luthintelwe ngenene kwaye lurhabaxa kwiindawo ezithile, ke ngoko phumela ngaphesheya kwendlela eya eRincon Park District Seashore kwimeko apho uthanda isanti ebanzi ngakumbi.
Ukuqhubela phambili ukuya elunxwemeni yiCarpinteria Feigns Nature Reserve apho unokusebenzisa khona iindlela kunye neCarpinteria Seal Safe-haveture ejonge apho ungabona khona ukutywina kwelanga phantsi.
I-Naturists yaphikisana ngamandla ukuba ihambisane necandelo lokunxiba elinokukhetha elunxwemeni lolwandle kwaye ngo-2017, i-Ofisi yeePaki zeSithili kunye ne-Sheriff yeNgingqi bavumile ukuyeka ukumakisha ngaphandle kokuba kukho isikhalazo.
Uphawu oluthi "Akukho Bareness" luphawu olushiyekileyo kwelona ndawo liphezulu lokuhamba elunxwemeni lolwandle, ukanti malunga neenyawo ezili-1,200 ngasentshona uya kulandelela omnye umqondiso olumkisa ukuba “Ungena kwiNgingqi yeMpahla- Ezizimeleyo,” ebonisa ukuqala kommandla wabo ovunyiweyo.
11. I-Terranea Cove Beach - eRancho Palos Verdes
Asinguye wonke umntu oqondayo ukuba cove encinci ethule ngasemva Irizothi yaseTerranea ikwafumaneka nakuluntu jikelele.
Unxweme lolulamile kwaye lufikeleleka kukuhamba ecaleni kwamawa, kodwa ngenxa yokuba indawo yabakhenkethi ibonelela ngezitulo, umntu unokufika engenanto kwaye aneliseke.
Kwakhona, eyona nto inomtsalane ngumqolomba wolwandle, ekunokuba nzima ukufikelela kuwo nabantwana abancinci kodwa ukunyuka okunomdla ematyeni kumaza asezantsi kubantwana abadala.
Ukupaka kuyafumaneka kuluntu ngokubanzi kwindawo yokuhlawula ebhalwe umqondiso kwicala lasekhohlo kwiTerranea Way. Kukuhamba kancinci ukuya eTerranea Cove ukusuka apho.
Kulabo bethu abanokudinwa ngokwenene yimfudumalo, unxweme lolwandle olusentla Oxnard yinto emnandi. Elona nxalenye likhulu liyinto epholileyo efana ne-15 degrees kwaye amandla akhululekile ngokungenakuphikiswa.
Ukuhamba nje kangangeyure ukusuka eLA, kukho umthwalo omkhulu wezinto ezimnandi ekufuneka uzenzile eOxnard usuka kumjelo wokuqeshisa ngeskiya uye kuhlola uhambo kwiiChannel Islands- apho Unxweme luka-Oxnard nika umbono wasezulwini kwi.
Ukujonga ukuqeshisa indlu elunxwemeni kude kuphele iveki kwindawo ethile? Uya kufumanisa uninzi lolwandle kunxweme lwaseOxnard, nangona kunjalo, iOxnard Seashore ngokwayo ingangumvuzo.
Amaza apha ayakhwankqisa, kwaye kukudibana kuphela ne-canine elahliweyo ye-Oxnard Seashore Park, ebalasele ngokuthwebula, ukubhabha ikayiti, ukuhlala emanqamleni esanti, kunye nokujonga ngokunganyanzelekanga ii-canines zabanye.
Ukuyeka kukhulu kwaye kuthobekile, kwi- $ 5 yosuku lonke (imali). Ungayizisa i-canine yakho ukuba ikhonkxiwe, kwaye okoko iOxnard Seashore ikwiNdawo yeBhayisikile yoNxweme lwePasifiki, yindawo efanelekileyo yokuzisa ibhayisekile yakho.
Ukubhuka kuyadingeka kwiipikniksi ezininzi, ke tsalela umnxeba (ngo-805-385-7946) ukuze uthathe indawo.
Olunye lolwandle oludumileyo kwindawo eyiGreater Los Angeles Santa Monica. Iilwandle zayo ezinde, ezimhlophe ezinesanti, ipier, ziyichaza kunye neAnenenberg Community Beach House, kwaye ihlala ixakekile yimisebenzi kunye nabantu.
Ii-roller coasters, i-Segways, i-pancake, kunye neehotele zodidi zonke ziyafumaneka eSanta Monica Beach, ekwagcoba ngesona santi imhlophe emhlabeni.
Awujonganga ukuba awufumani nto yokwenza apho. Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
14. I-Sunset Ibhitshi- i-Orange County
Olu lwandle lungathandabuzekiyo luyintandokazi yendawo, ngenxa yokufikelela kwayo ngokulula, indawo yokupaka yasimahla esitratweni, kunye neembono ezifanelekileyo zekhadi.
Xa kuthelekiswa neelwandle ezikufutshane, yindawo engaphandle kwendlela engaphambi kwendawo yangasese evaliweyo egcina ama-hordes e-bay, evumela ukuba kubekho usuku olwandle oluzolileyo.
I-Sunset Beach ibonelela ngezindlu zangasese kunye noonogada, kodwa akukho kutya ngaphandle kwaleyo ungenisa kuyo kupholile. Nangona iHuntington Beach iyidolophu ekufutshane, iSunset Beach yeyona ndawo ingenakudityaniswa kuyo Orange County.
Phakathi kwesitalato iAnderson kunye neWarner Avenue, kwintshona yePacific Avenue lulwandle.
15. Umenzi wenkunkuma
Ukulandela ixesha elandisiweyo le Umgcini wedilesi imililo emikhulu ivaliwe, eminye ekugqibeleni ibuyiselwe elunxwemeni kwaye iyafikeleleka ukuyisebenzisa. Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
Imililo emikhulu ayikho semthethweni eLos Angeles kwaye ukufikelela kwabo eDockweiler yinto enye kuphela eyahlula lo unxweme-qinisekisa nje ukuba uyayibeka indawo yakho ngexesha elifanelekileyo njengoko baya kuthi bonke baphume ngokukhawuleza.
Kwimeko apho ukhangela uvavanyo, thatha umdlalo wakho we-bar-b-que uphume-ufumane inyama eBelcampo xa usenyuka, kwaye usete i-barbecue encinci phezu komlilo.
Utywala abuvumelekanga eDockweiler, kwaye uza kubona amapolisa abahamba ngeenqanawa bejikeleza.
Asinakuze sikhokelele ekuchaseni imigaqo, okuthetha ukuba asinakuze sikukhuthaze ukuba ubambe ezinye iikomityi zokutya ezingabizi kakhulu ngaphambi kokuba uzibonakalise kwaye uzikhuphele kulwelo olufanele ukhetho lwakho, okwenza kube nzima kakhulu kuwo nawuphi na umthetho ophumezayo.
Akukho thuba lokuba sikhe siyikhuthaze nangaliphi na ixesha. Kuncinci kakhulu kufutshane neDockweiler (ngaphandle kokuba uzama ukutya eRemiss), ke iya kuba luhlobo lweBYO Cookout losuku.
Ipaki yeSizwe yaseLeo Carrillo yindawo eyahlukileyo yokusingqongileyo enamawa amakhulu, umlambo iMalibu onokuhamba kuwo, kunye namanzi acocekileyo anamachibi amaninzi. Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
Yiparadesi yabaselwandle, abadadayo, iindawo zokulala elunxwemeni, iindawo zokubethwa ngumoya, abathandi bokuloba, kunye nabahloli abanomdla beeseli zonxweme, ezibekwe kwiikhilomitha eziyi-1.5 zolwandle olufanelekileyo.
Inkampu yolwandle ekhuselwe yimithi yesikamore emikhulu inokuba yeyona ndawo iphambili, kodwa amanzi kaLeo Carrillo anokuhlala kulo naliphi na undwendwe.
Izinto eziphambili zokwenza eTennessee
Izinto zokwenza ePigeon Forge
Kubonakala ngathi injongo yokukhwela kwentloko kaMalibu, Zuma uhlobo lwabantu abathile abasuka kumfanekiso waseMidwest xa bejonga ulwandle lwaseLos Angeles- badubula itoni yeBaywatch apha.
UZuma mhlawumbi lolona lwandle lolwandle lukhulu kuyo yonke i-LA, ke ngaphandle kokuduma kwayo kufuneka, nangayiphi na imeko, ube nokukhetha ukuntywila kwisibhengezo esifanelekileyo; Kukwayindawo apho uza kufumanisa khona iPoint Dume, umtsalane omkhulu onamathela elwandle.
Ukuba uthe wakhwela ilitye, zenzele phezulu ukuze ube nembono yokwenyani yeengonyama zolwandle ngesiqhelo. Zininzi izinto zokumisa, nangona kunjalo, ngenxa yokuxokozela kukaZuma malunga noku kungafumana ixabiso kunelunxwemeni lolwandle olwahlukileyo-amaxabiso ehlobo anokunyuka aye kuthi ga kwiidola ezili-10 emva kwemini (kwaye kungabikho kuvunyelwa ukumisa ebusuku).
Qinisekisa ukuxhaphaza izibonelelo, nangona kunjalo, njengezindlu zangasese ezimbi, iishawari, kunye neenkundla zebhola yevoli.
Ngelixa iindawo zokutya zimi kwindawo enye okanye kwicala elisecaleni lolwandle, naluphi na usuku olubalaseleyo lweMalibu kufuneka luqale (okanye luphele) eMalibu Wines-lelona nqanaba lisemgangathweni lokusela emini eLos Angeles.
Izizathu ziyakhazimla ngokupheleleyo, kwaye isiseko sabathengi nangakumbi. Okanye kwelinye icala xa uthanda ukunambitha iwayini kunye negrub kwiimarike ezintsha kunye nolwandle njengamava akho, intloko eMalibu Ranch Restaurant eMalibu Dock.
18. Ngaba uRogers State Beach
Le paki isitshixo esiphantsi nesanti eyaneleyo ukuba yolulwe ibekwe kanye emantla eSanta Monica Pier. Kwakhona, le yindawo ebalaseleyo yokuqubha, ipikniki, okanye ukudlala ibhola yevoli (iminatha apha mininzi).
Indlela ehamba ngebhayisikile kaMarvin Braude eyi-22 yeemayile nayo iyaqala, ke yiza ne-cruiser elunxwemeni (okanye uyiqeshe enye) ukuphonononga elunxwemeni. Le yenye yeeNdawo zoLwandle eziLandelayo kufutshane nam.
Ngaba ujonge ukubaleka izihlwele? Inkqubo ye- mmandla osemazantsi eTopaz Jetty yenye indawo ezolileyo yokuhlamba ilanga elunxwemeni lweSouthern California.
Izinto eziluncedo zincinci, kodwa ukuba ufuna ukuphithizela ngakumbi, ukuhamba okufutshane kukukhwela, ukubamba iRedondo Beach Pier, apho uDennis Wilson kunye noMike Love ekuqaleni bavumile ukuqamba ingoma malunga nokusefa.
Unxweme luyafikeleleka ngamanyathelo oluntu eTopaz nase-Esplanade.
20. Inja yaseRosie yoLwandle
URosie waseCanine oLwandle, Siyavuya ukuthi, yile nto kanye ocinga ukuba injalo. Ngaphandle kwentambo, uya kuyibona kwindawo yaseBelmont yoLwandle olude olwandle.
Imidlalo kaRosie ibamba iziqwenga zemidlalo ye-canine ngokunjalo, ke nangaliphi na ixesha ukhe wamkelwa ngoFacebook ngento enje nge "Corgi Seashore Day," amathuba okulunga ayeseRosie. Ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndawo iphambili apho unokuthatha inxaxheba khona kwi-canine emanzi.
Iiyure ze-canines zi-6 kusasa-8 pm, ke, abahlobo bakho abasenyongweni abavumelekanga kunxweme lolwandle ngaphandle kwelo xesha.
Ukongeza, jonga ukuba unxweme alubiyelwanga, kwaye ugcine engqondweni ukuba ezinye iingxowa ze-crap ziyafikeleleka kwizikhongozeli, kuyachaza ukuzisa ngokwakho.
I-Long Seashore, eneneni sisithili se-LA, inenani elothusayo leepummels ezimangalisayo kwiofisi yokutya nokusela.
Nakuphi na ukungxama ngokutya kwaseMexico kufanele kukukhokelele kuLola: kuyapapashwa ngokumangalisayo, kodwa kufanelekile ekukhanyeni kwento yokuba ukutya kuyamangalisa. Le yenye yeeNdawo zoLwandle eziLandelayo kufutshane nam.
Ubusuku ebusuku Hermosa Phantse kunzima ukuya phezulu, kwaye ungazifumana emaphethelweni edokodo elide-thatha umntu omthandayo, kwaye ngokuqinisekileyo singenza iingxelo eziza kusebenza ngokuqinisekileyo.
IHermosa Cyclery yindawo engaqhelekanga yokuqalisa usuku lwakho ukuba ukwimeko yengqondo yokuqeshisa iibhayisekile ezimbalwa kwaye uthathe inxaxheba kumoya wolwandle.
Kwimeko apho udlala ibhola yevoli okanye intenetya, uHermosa uneenkundla zakho.
Zama ukungalindeli ukuba iHermosa Seashore Dock ingafana nayo nayiphi na indawo iSanta Claus Monica Wharf-akukho kukhwela kunye nomtsalane apha, yindawo nje ebandayo yemidlalo eyahlukileyo xa ilanga litshona.
IHermosa ayinawo umsi, oko kuthetha ukuba ukutshaya kunye nokuqhuma (ukuhlawula ingqondo encinci kwinto oyitshayayo) akuvumelekanga nakweyiphi na indawo kawonkewonke.
IHermosa Seashore igcwele ukutya kunye neziselo zenqanaba lokuqala, ngakumbi u-Baran ka-2239 (zama iqanda laseIndiya), iBarsha (isibini se-La Goulette mussels newayini emhlophe evuselelayo), kunye nePalmilla Cocina Y Tequila (thabatha ikhukhamba jalapeño margarita kwaye ujonge ngokulangazelela elwandle).
Ukufumana yonke into inye kuzo zonke iimfuno zakho ezahlukeneyo, betha u-Abigaile: indawo leyo iqala njengesixhobo sokutya sokutya kunye nomgangatho wokuqala wokutya, kwaye uguquke waba ngumdaniso wophahla ophakamileyo phezulu. Le yenye yeelwandle ezikufutshane nam.
Ulwandle lweSixeko saseHuntington lolona lwandle lubalaseleyo lobude, lubekwe ngaphakathi kwepaki ye-121-acre eyakhiwa ngo-1942 kwaye igubungela i-tippity-top ye-Orange County.
Iyaziwa ngokuphuka kwayo kwi-surf, kwiMyuziyam yase-Surfing yaMazwe ngaMazwe, kunye nosuku olusebenzayo nangokuhlwa. Kukho iivenkile ezininzi ze-surf apho unokurenta khona ibhodi okanye uthenge itawuli, kunye neeresityu ezininzi, ii-pubs, abenzi bendawo, kunye nepier entle.
Nangona ingekho elunxwemeni, ungangakhathali ukuba awuzange uzame iSurf City Taco yaseNormita, indawo oyithandayo.
23. Manhattan Unxweme
Ayizukwedlula IHermosa, iManhattan Seashore Kuya kuthi ngokunjalo kubonise ezinye izithunzi zempambano kwicandelo lobusuku.
Kulula ukonyusa usuku ngemithambo apha, kunye noMzila weBhayisikile kaMarvin Braude, iPolliwog Park (indawo entle yegalufa yepleyiti), kunye neSand Rise Park, yile nto ibonakala ngathi.
Abantu basebenzisa ithambeka elikhulu ekusebenzeni, nangona kunjalo, uyazi ukuba leliphi ixesha elingcono kunokwenza umsebenzi (ngaphandle kwayo yonke into)? Isandboarding.
Ngeemayile ezimbini zonxweme lolwandle kunye neendawo nje zokupaka ezingama-500, amathuba aphakamileyo ukuba usuku oluhle.
Amanxweme olwandle aMazantsi ngqo ayisiyiyo i-buzz blast yohambo lokuhamba oya kuthi ufumanise eSt Nick Monica naseVenice, kodwa inokuba yeyona nto uyifunayo.
Ukutya / ukusela phi: IManhattan Seashore Post yintshatsheli yesidlo sakusasa esisindayo esinobunzima, esineebhakoni ezaneleyo zesonka kunye ne-chimichurri skirt steak yokoyisa nayiphi na intloko. Kwimeko apho bezele khona, Ukuloba ngeDynamite yenye into ekufuneka yenziwe, ngenxa yento enokuba yeyona bar ingcolileyo esixekweni.
24. Inqaku leDume State Beach
Ingongoma Dume imi kwindawo esemazantsi eMalibu, kwithambeka elingena kwiPasifiki kwaye lithambekele elunxwemeni oluthandekayo.
Amanzi acace gca, okwenza ukuba ibe yindawo entle yokuqubha ngemini eshushu yehlobo, kunye nendawo entle yokuqubha apho ungadada khona neengonyama zolwandle.
Unxweme luyaziwa ngokuba yindawo efanelekileyo yokufunda ukunyuka amatye. Kukho into encinci kuwo wonke umntu okuyo.
25. I-El Matador State yoLwandle
Imatador Luhlobo lolwandle apho i-Angeleno iya kukuhambisa kude ufike kwisikhululo seenqwelomoya.
Ngummangaliso wendalo, wangcwatyelwa phantsi kwizinyuko ezinamajikojiko enqabileyo enamatye abonakala ngathi avela ePacific, kunye namachibi olwandle anika umbono woogxa bethu baselwandle.
Ukuba uthatha isigqibo sokubatyelela iifoto okanye ujonge nje, nceda ulumke unxibe izihlangu zamanzi kuba amatye asenokuba ayatyibilika. I-El Matador ayinazo iinkonzo okanye izibonelelo kuba bubuncwane bendalo.
Uyakulungela usuku ukuba uzisa iitawuli zakho zaselwandle, i-sunscreen, kunye nezinto zepikiniki.
Izinto zokwenza e-Orland, FL
Iindawo ezili-10 ezimangalisayo zokundwendwela ngo-Okthobha
Izinto zokwenza eDC kule mpelaveki
Ezona ndawo zintle eMhlabeni
Qaphela, sikhetha ezona ndawo zolwandle zintle nakwiLos Angeles, kunye neengcebiso malunga nendlela onokusebenzisa ngayo wonke umntu.
Usuku lokukhumbula lubonisa ukuqala ngokungekho sesikweni kwehlobo eMazantsi eCalifornia, okuthetha ukuba ixesha lolwandle ngoku lihamba ngesantya esipheleleyo ngaphambili.
Ngaphezu koko, apha e-LA, apho kungekho nzima ukufuna iintsuku eziqaqambileyo zokwenyani, sinokukhetha okuninzi xa kufika ixesha lokuyila amava akho alandelayo esanti.
Sebenzisa kakubi unxweme lwethu olunobuninzi ngobuninzi bolwandle oluselungelweni lokubhabha ngesikhephe, ukuntywila emanzini, ukubhukuda, okanye nje ukuthambisa ilanga entlabathini. Siyakuqinisekisa ukuba ekugqibeleni uza kutshintsha ngokungqinelana namaqondo obushushu apholileyo oLwandle lwePasifiki, ngakumbi kwiinyanga ezingaphambi kokuwa xa ubushushu obomileyo bunganyamezeleki.
Ngasentla ziindawo ezingaselunxwemeni ekufuneka ungene ngaphakathi naseLos Angeles, kunye neendawo omele uzitye xa ulapho. Ndiyathemba ukuba uyabathanda.
Nceda ushiye uluvo, njengolu nqaku kwiiLwandle ezikufutshane nam, kwaye uxelele abahlobo bakho kunye nosapho malunga nalo!
tags:iilwandle e-los angeles zivulekile, iilwandle ezikufutshane nam, iilwandle ezilungileyo kwi la, Unxweme lwase laguna, unxweme olude, ulwandle lwe venice
Imiyalezo yoThuthuzelo eya kuBoss: Iindlela ezingama-65 zokuVavanya noMqeshi wakho
Uhlala ixesha elingakanani ukhula kwinkqubo yakho? Ziziphi iimpembelelo ezifumanekayo?
Ngaba i-CVS iyathenga / ithengise ii-odolo zemali? Ungabafumana njani kwiCVS Pharmacy
Izihlangu ezigqibeleleyo zeNike zokuhamba, ukubaleka okanye abahlengikazi abame yonke imini
Iilwandle ezigqibeleleyo kwihlabathi kunye neziqithi ezimangalisayo zeCaribbean zokuHamba
Amadoda aDoodorants aGqwesileyo kunye neAntiPerspirants eziMangalisayo zokuHlala zihlala zintsha
Abona baGcisa baGqibeleleyo bobuso kunye nazo zonke iindidi zolusu kunye neziBonelelo zabo eziMangalisayo
Abadlali abaMnandi kakhulu kwiNetflix kunye nama-25 amaFilimu amaninzi asolisayo ukuba ubukele
Ilanga Blog Copyright © 2021.
umxholo ngokuthi MyThemeShop.	Buyela Phezulu ↑